२४ बर्षपछि भरतपुरको मेयर लड्ने प्राडा सापकोटाको चाहना - Khabar Muluk
चितवन – प्रा. डा. केशवभक्त सापकोटाले आसन्न स्थानिय निर्वाचनमा मेयर पदको दाबी गर्ने भएका छन।२४ बर्ष अधि पनि भरतपुरको उममेयर बन्न काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्बारीको लागि उनले नाम सिफारिस गराएका थिए।
हाल बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका सापकोटा पेशागत बुद्धिजिबि बिभाग बागमतीको प्रमुख पनि हुन। सापकोटाले समयसापेक्ष महानगरलाइ परिबर्तनकारि बिकासको बाटोमा लैजाने आफ्नो योजना बनाएका छन।केहि दिनपछि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र समेत निकाल्ने उनको तयारी रहेको छ।
आफ्नो जिबनकालनै शिक्षा क्षेत्रमा बिताउँदै काङ्ग्रेसको राजनीति गरेका सापकोटा भरतपुर महानगरको मेयर यसपालि गठबन्धनकाबिच काङ्ग्रेसले पाउनेमा ढुक्क छन।
गाउँ देखि सहर सम्म आफुले पढाएका विद्यार्थी रहेका र बाकी पनि अभिभावक भएकाले आफुलाइ महानगरमा जित्न कठिन नहुने उनको दाबी छ।
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी पिएचडि गरेका सापकोटाले शिक्षा यात्रा २०४४ सलमा बालकुमारी कलेज हुदै वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख भइ अबकाश लिएका हुन।
यस्तो छ सापकोटाको राजनैतिक यात्रा
सापकोटाको राजनीतिक यात्रा सिङ्गो परिवार सहितको रहेको पाइन्छ । पञ्चायती निरंकुशतन्त्रको विरुद्धमा लड्नको लागि काङ्ग्रेसले सापकोटाको घरलाइ २०३० साल देखि २०४६ साल सम्म सेल्टरको रुपमानै प्रयोग गरेको थियो।
२०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा वीरेन्द्र क्याम्पसबाट प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न भएका सापकोटाले २०३७ सालमा ने.वि,संघ. जिल्ला कार्यसमिति चितवनको सदस्य हुँदै २०४२ सालको सत्याग्रहमा केन्द्रीय क्म्याम्पस कीर्तिपुरबाट स्ववियुको निर्वाचनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा पञ्चायती निरंकुशतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलनमा लागिरहँदा बुवा
दधिराम सहित उनी पनि भरतपुर जेलमा परेका थिए।
काङ्ग्रेसको आठौं महाधिवेशनमा भरतपुर नगरपालिका साविक वार्ड नं ६ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुँदै जिल्ला कार्य सिमितिमा रहेर समेत उनले कार्य गरिसकेका छन।
त्यति मात्र नभएर २०५४ सालमा भरतपुर नगरपालिकाको उप प्रमुख पदमा ३ जनाको नाम संसदीय बोर्डमा सिफारिस हुँदा सापकोटा पनि परेका थिए।
उनले २०४९ र २०७३ को स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको स्थानीय घोषणा पत्र निर्माण समितिमा रही कार्य गर्दै २०५३ र ५७ सालमा जिल्ला सल्लाहकार सदस्यको भुमिका समेत निर्वाह गरेका हुन ।
आफु र आफ्नो परिवारको काङ्ग्रेसमा ठुलो योगदान रहेको हुनाले पार्टीले आफुलाइ मेयरको टिकट दिनेमा ढुक्क रहेको उनी बताउँछन।
प्रकाशित मिति : चैत २९, २०७८, मंगलवार १७:३७ बजे